ဇွန် ၂၀၁၄ | NAB သတင်းများ | 2016 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » ဇွန်လ
Etere ETX Bluefish444 ယုဂ်နှင့်အတူ Compatibility ကိုကမ်းလှမ်း | 4K ဆူပါနိုဗာက S + ယုဂ် | ဆူပါနိုဗာ CG နှင့်ယုဂ် | အသစ်ကဖြန့်ချိ Etere 26.3 နှင့်အတူနျူထရွန်ကတ်များ။ မဲလ်ဘုန်း, သြစတြေးလျ, ဇွန်လ 29, 2016 - ။ Etere ယင်း၏ 4K, အိုင်တီ-based ကိုဗီဒီယိုစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက် Etere ETX ယခု Bluefish444 ယုဂ်ကိုဗီဒီယိုကတ်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် Etere မဲလ်ဘုန်းမြို့ရဲ့ဆန်းသစ်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ, ထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူပူးပေါင်းကျေနပ်သည် ...
ယခုရှေ့ဆက်အချိန်ဇယား၏စီမံကိန်းကိုနှင့်အတူ IU သည်က၎င်း၏ဧရာ digital ပဏာမသို့လိုက်ရုံတစ်နှစ်ထပ်တိုး clients များအပေါ်ယူ Memnon ရဲ့ Bloomington စက်ရုံဖွင့်လှစ်, Indiana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ပြီးသားပိုမို 100,000 အဖိုးတန်အသံနှင့်ဗီဒီယိုအသံသွင်းထက်ပျက်စီးခြင်းထံမှ Memnon Inc မှအတူအောင်မြင်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုကျေးဇူးတင်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ထားပါတယ် ။ တစ်ဦးကို Sony ကုမ္ပဏီ၏။ ယနေ့ IU သည်ကတိုးချဲ့ခဲ့သည်ဟုကြေညာခဲ့သည် ...
'' Deranged အိမ်ထောင်ရေး '' ပေါ်လုပ်ငန်းအသွားအလာရပ်တန့်ဖို့အဆုံးအဘို့အသုံးပြု Blackmagic URSA နှင့် DaVinci ဖြေရှင်းရန်စတူဒီယို
Blackmagic ဒီဇိုင်းယနေ့ Blackmagic URSA ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကင်မရာ, ထုတ်လုပ်မှုကင်မရာ 4K နှင့် Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာလာမည့်ရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲများအတွက်ရှေ့ပြေးဇာတ်လမ်းတွဲကိုရိုက်ကူးဖို့အသုံးပြုကြသည်ဟုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် "Deranged အိမ်ထောင်ရေး။ " DaVinci စတူဒီယိုဖြေရှင်းအဆုံးမှအဆုံးသို့တိုင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့သည် အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်တည်းဖြတ်ရေး, Composting နှင့်ပြီးအပါအဝင်လုပ်ငန်းအသွားအလာ။ , Written ညွှန်ကြားထား, DPed နှင့်အနုမြူ၏ Ari ဂေါလန်မြို့တည်းကထုတ်လုပ် ...
ခင်မှာ & ကျောင်း / နွေရာသီအစီအစဉ်ဆိုက်ကိုလက်ထောက်ပြီးနောက်
END သည်ရလဒ်ပေါ်မှာ Rochester, NY အမေရိကန် EFFECT :. : မဟာ Rochester တည်နေရာ၏ဝိုင်အမ်စီအေ ကျောင်းအစီအစဉ်သင်တန်းနှင့်အစည်းအဝေးများပြုလုပ်မီနှင့်ပြီးနောက်သင့်လျော်သောတကျရောကျပါ။ အဆိုပါ Multi-ဆိုက်ကိုညှိနှိုင်းရေးမှူး၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအောက်တွင် ... နောက်ထပ် >>
ဆရာများကောလိပ်ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်တည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်ဗီဒီယိုကိုဘဏ်ဍာကျွမ်းကျင်မှု။ Asha ပညာရေးခရက်ဒစ်ဆက်လက်အဖြစ်အတည်ပြုခံရဖို့ဗီဒီယိုကို module တစ်ခုသင်တန်းများအတွက်လျှောက်ထား ... ။ more >>
စက်မှုဒီဇိုင်း / 3D ဒီဇိုင်နာ International
IDL တည်နေရာ: Pittsburgh PA ဆိုပြီးအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ 3D မော်ဒယ်လင်း software ကို (3d မက်စ်), Photoshop ကိုနှင့် Illustrator, ပုံကြမ်း / ပုံဆွဲထဲမှာကျွမ်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ ကျနော်တို့ >> နောက်ထပ် ... တစ်စက်မှုဒီဇိုင်းအလုပ်သင်ဆရာဝန်မှရှာဖွေနေကြသည်
Program ကိုကြီးကြပ်ရေးမှူး: ကျောင်းခေတ်
END သည်ရလဒ်ပေါ်မှာ Shoreline WA အမေရိကန် EFFECT: သာ. ကွီးမွတျဆီယက်တဲလ်တည်နေရာ၏ဝိုင်အမ်စီအေ။ အမြတ်ရခြင်းအ, သို့မဟုတ် (အလုပ်အကိုင်အပြီးနောက်မ 90 ရက်ပေါင်းထက်ပေမယ့်) အစောဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ရေးမှာ။ သေချာအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏အကောင်အထည်ဖော်မှု ... နောက်ထပ် >>
Ches-Lee ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, Inc တည်နေရာ: Austin TX အမေရိကန်ဒါ့အပြင်ကြော်ငြာတွေ, နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ, နဲ့ Photoshop, InDesign သို့မဟုတ်အခြား Adobe ကအစီအစဉ်များကိုသုံးပြီးအခြားလိုအပ်သောဂရပ်ဖစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲထည့်သွင်းရန် ... ။ more >>
1 ၏စာမျက်နှာ 5212345 » 102030...နောက်ဆုံး»